China Fridge Magnet ifektri abakhiqizi | YANJIN
Usayizi: 6 * 6cm
MOQ: Ama-200pcs womklamo owodwa
Isikhathi esiholayo: 20-35days
Sinezinklamo ezahlukene zokukhetha kwakho. Futhi singapenda imiklamo yakho kuthayela. Futhi insizakalo ye-OEM iyatholakala.
Uzibuthe ongemuva kwawo unganamathiselwa kunoma iyiphi indawo eyisiqalo nebhodi kazibuthe. Njengeminyango yesiqandisi yensimbi, amashalofu wensimbi, ama-hoods ebanga, ama-ovini, amakhabethe wokugcwalisa amahhovisi, iminyango yezokuphepha, amabhodi amade kazibuthe, amabhodi amhlophe kazibuthe, amabhodi wokudweba wezingane kazibuthe, njll.
Ayikwazi ukukhangiswa eminyango efrijini yengilazi emnene, iminyango yokhuni, izindonga, ingilazi.
Izinto zobumba azimelene nokuwa, qiniseka ukuthi uyiphatha ngobumnene, sicela ungaswayipheli emuva naphambili esiqandisini ukugwema ukuklwebheka. Umsebenzi omkhulu ukuhlobisa ikhaya, hhayi ukudlala izingane.
1. Usayizi: 6 * 6cm
2. I-Ceramic tile + Magnet
Intengo 3.Reasonable nge high
4. MOQ: ama-200pcs womklamo owodwa
5.Isikhathi sokuhola: 20-35days
Uzibuthe wethu udwetshwe ngesandla ngombala wothingo olukhanyayo, Faka umbala obabazekayo efrijini lakho noma ukufaka amakhabethe ngala makethe ayingqayizivele!
1. Okunhlobonhlobo - Faka ozibuthe abasha abasha kunoma iyiphi insimbi noma amandla kazibuthe, njengebhodi likazibuthe, indawo yokulala, amamephu, iziqandisi, ama-air conditioner, okhiye, imishini yokuwasha, ibhodi lokusula kazibuthe, amafayili ehhovisi lensimbi njll. clip izithombe.
2. Okuhlobisa - Amaphethini wokudala, umbala ogqamile, engeza ubuhle ekuhlobiseni kwakho.
3. Umklamo ohlukile wethayela elenziwe ngezandla, njengezwe, eningizimu-ntshonalanga, i-classical, yothando, i-Victorian, i-oceanic, izilwane, izinyoni, izimbali, amakhambi, njll. Futhi singenza futhi siklame ngokuya ngomdwebo nesicelo sakho.
4. Konke kupendwe ngesandla ngabasebenzi bethu abangochwepheshe.
5. Ukusetshenziswa: Fanela noma yikuphi ukuhlobisa kwangaphakathi kwazo zonke izinhlobo zezindawo.
Langaphambilini I-Ceramic Art Decorative Art Tile eyenziwe ngesandla
Olandelayo: Amathayili Anezinhlaka